Power omen'ny masoandro. Performance nomen'ny Cooper B-dalana.
Besca fikasana sy ny orinasa manufactures-tsaina anao koa anefa nitarika masoandro sy ny fitomboan'ny vahaolana ho an'ny ara-barotra sy ny Utility Scale Photovoltaic tetikasa.? Installers sy ny tompon'ny tetikasa tonga mba miantehitra amin'ny masoandro tsaina anao koa anefa ny vahaolana mba hanampiana:
Manatsara ny fotoana fametrahana
Ampitomboina ny rafitra fampisehoana
Tsy manan- tsahala fahaiza Manufacturing
Maherin'ny iray tapitrisa toradroa tongotry ny eran-dian-tongotra orinasa mpamokatra entana, Besca tsy tapaka manome vokatra tsara ho an'ny masoandro izay saika tetikasa habe na ny toerana.
Speed ny Installation
Ny kolontsaina ny fanavaozana mitarika ny injeniera sy ny mpiasa hanao ny mari tsy manam-paharoa sy ny fotoana labor--tsaina anao koa anefa fahavaratra sy ny fitomboan'ny rafitra izay manome vola lany tanteraka ny fametrahana ambany indrindra.
Complete mandanjalanja ny System
Besca dia miavaka napetraka mba hanolotra ny tsipika feno ny fiderana singa mba seamlessly mitambatra tontonana fitomboan'ny, tariby na ny tariby fitantanana, fefy, fasteners sy ny maro hafa mba hanampy hanomezana vahana ny fahombiazana sy ny teknolojia ao anatin'ny tetikasa masoandro.